Zombie-Followers: Ny maty dia mandeha eo amin'ny tontolon'ny marketing influencer | Martech Zone
Alakamisy Oktobra Oktobra 29, 2020 Alatsinainy Janoary 18, 2021 Harleen Dorka
Nahita mombamomba ny haino aman-jery sosialy ianao miaraka amin'ny isa mpanaraka avo kokoa noho ny salan'isa, ny tiany an'arivony ary ny traikefa niarahanao tamin'ny marika taloha - fitaka na hitsaboana?
Miaraka amin'ny isan'ny fampielezana marketing influencer tsy mitsaha-mitombo, tsy dia fahita firy ny marika hanjary ho voafitaky ny kaonty toa izany miaraka amin'ireo mpanaraka sandoka sy mpijery tsy marina.
Araka ny Fandraisana Marketing Influencer:
Marketing marketing dia kasaina hitombo $ 9.7B eo ho eo amin'ny 2020.
300% fanampiny influencer micro ampiasain'ny orinasa lehibe noho ny tamin'ny 2016.
Manakaiky ny 90% amin'ny fampielezana fampielezana rehetra no misy Instagram anisan'ny fifangaroan'ny marketing.
Famitahana ny influencer dia mitombo ny ahiahin'ireo voavaly izay maherin'ny 2/3 ny valinteny niainany.
Tsy midika akory izany fa tafiditra ao anatin'io sokajy io avokoa ireo mpanetsika makro rehetra. Raha ny marina dia vitsy sy lavitra ny paoma ratsy ary betsaka noho ireo izay marin-toetra sy azo itokisana tanteraka.
Na izany aza, zava-dehibe ny mahatakatra tsara ny fomba hisafidianana influencer izay manana ny fikasana tsara indrindra ho anao sy ny marikao.
Ankehitriny, tsy manandrana mampatahotra olona lavitra ny marketing influencer izahay. Ny mifanohitra amin'izay no izy. Ary ny fangatahana ny fanampian'ny masoivohon'ny marketing influencer dia afaka manampy ny marika hahita mpanan-kery miaraka amin'ny mpihaino tsy mivadika sy tena izy izay hanampy amin'ny famerenam-bola mahavariana.
Ny haino aman-jery sosialy dia iray amin'ireo mpanelanelana niainana fitomboana tsy manam-paharoa tato anatin'ny volana vitsivitsy. Ny mpivarotra rehetra dia afaka mahita fa ny hetsika fampiroboroboana eo amin'ny sehatra an-tserasera dia mila mamorona ampahany amin'ny paikadin'ny marika mandroso. Ary ny fiaraha-miasa influencer dia iray amin'ireo tetika mahomby indrindra sy voajanahary ampiasaina hanaovana izany.
Amelia Neate, mpitantana ambony Influencer Matchmaker
Tsy diso i Amelia. Raha ny marina, ny marketing influencer no fomba fividianana mpanjifa an-tserasera haingana indrindra, miaraka amin'ny 22% ny mpivarotra koa dia manisy marika azy io fa mahomby indrindra.
Ary vokatr'izany, 67% ny mpivarotra amina marika amina sehatra maro dia miomana amin'ny fampitomboana ny volan'ny marketing influencer mandritra ny 12 volana ho avy.
Saingy, rehefa manomboka mihombo ny marika miaraka amin'ny hetsika influencer, dia nanazava i Amelia ny fomba hanaovana ny tsara indrindra amin'ny fampielezana marketing influencer, hahazoana antoka fa mahomby araka izay azo atao.
Matahotra ny mpanaraka sandoka
Ny mpanaraka sandoka sy ny fitarika maty dia miseho amin'ny endrika maro. Malaza ho mpanara-dia nividy no iray amin'ny fahita indrindra, ka ny tsirairay dia mandingana ny asa mafy tafiditra amin'ny fidangan'ny haino aman-jery sosialy, ary kosa, mandoa vola ho an'ny mpanaraka sandoka mba hahatonga ny kaontiny ho lehibe kokoa noho ny tena izy.
Na dia manjary zavatra melohin'ny mpampiasa sy ny marika aza izany, raha tsy hoe hita izy ireo, dia mety ho sarotra ny manavaka ny fanisana mpanara-dia tena izy amin'ny isa sandoka.
Karazana mpanaraka sandoka hafa dia kaonty iray izay tsy nihetsika nandritra ny fotoana ela, na satria nanadino izany ny olona iray, tsy maniry hampiasa azy intsony fa tsy mamafa ny mombamomba azy, na raha tsy izany.
Fa na inona na inona antony, ny kaonty izay tsy mavitrika dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny laharana fandraisana andraikitra.
Manasongadina ny maha-manimba an'io marika io, ny fanadihadiana iray dia nahita fa mety ho betsaka ny isan'izy ireo 95 tapitrisa bots maka tahaka ny mpanaraka sandoka ao amin'ny Instagram fotsiny, mitentina 1.3 miliara dolara ho an'ny orinasa amin'ny fividianana maty antoka sy fatiantoka.
Hiadiana amin'ny vokatra manimba aterak'izany amin'ny marika iray, ny fampiasana ny fahaizan'ny masoivohom-barotra dia afaka manampy amin'ny fitsaharana ny saina ary hiantoka fa hahatratra an'arivony ny fampielezan-kevitra, raha tsy mpanaraka an-tapitrisany.
Manala ny olana
Nisy tranga maromaro nandritra ny taona maro izay nahitana olona manana ny toerany influencer meloka tamin'ny fividianana mpanaraka sandoka hanatsarana ny fahitana ny heriny sy ny lazany amin'ireo sehatra.
Ohatra, ny Bake Off's Hitan'i Paul Hollywood tamin'ny tantara ratsy nataon'ny mpanara-dia sandoka rehefa naka fialan-tsasatra avy amin'ny Twitter izy taorian'ny nandraisan'ny mpanaraka azy ny fanarahana ny tambajotran-tserasera nanala kaonty sandoka tamin'ny sehatra.
Ny fandalinana hafa dia mampiharihary avo tampoka mpanaraka sandoka isan-jato ho an'ny influencer malaza, toa an'i Kourtney Kardashian sy ireo influencer media sosialy isan-karazany.
Isa fotsiny izany amin'ny faran'ny andro, marina? Fa raha ny marika no jerena dia tokony haneno lakolosy fanairana izany. Rehefa mamoaka fampielezan-kevitra iray ny marika iray, dia ataon'izy ireo izany amin'ny fahatsapana fa hahatratra ny mpihaino marobe ny marika - ary ny iray efa tafiditra amin'izany. Ny influencers dia afaka mandoa vola be amin'ny paositra tokana, noho izany dia mila matoky ny marika fa ny fiverenana, ohatra, amin'ny tratra na fitrandrahana ho azony, dia ampy hanamarinana ny fandaniana.
Amelia Neate, Senior manager ao amin'ny masoivohon'ny marketing influencer manerantany, Influencer Matchmaker
Ka inona no tokony hataon'ny marika?
Nanazava i Amelia fa misy zavatra maromaro azo jerena rehefa miara-miasa amin'ny influencer.
Engagement - Raha tokony hiompana amin'ny fanisana mpanara-dia ianao dia omeo lanja bebe kokoa ny naoty fanombohana. Na dia mety ho kely kokoa aza ny haben'ny mpanatrika ny fampielezan-kevitrao, ireo izay tratrany dia azo inoana fa hifanerasera aminy. Ary izany no fomba hahatratraranao vokatra ary hahatratra ny tanjon'ny varotrao.
Mpampiditra mikraoba - Ny micro-influencer dia mazàna manana naoty avo lenta kokoa. Na dia tsy lehibe aza, ny mpihaino azy ireo amin'ny ankapobeny dia mifampiresaka sy mitombina ary noho izany dia afaka manaporofo fa sarobidy kokoa amin'ny marika.
Likes - Na dia misy aza ny fitaovana hanamarinana ny naoty fampiakarana dia azonao atao ny mampandeha ny fikarohana ataonao amin'ny fampitahanao ny isan'ny mpanaraka ny isan'ny tian'ireo mombamomba anao.
Comments - Raha mbola tsy azonao antoka ny maha-ara-dalàna ny influencer, ny fanehoan-kevitra dia anton-javatra iray hafa. Hamarino raha, voalohany, mahazo hevitra izy ireo ary faharoa, raha misy lamina na hetsika toa spam ao aminy. Ohatra, ny fanehoan-kevitra avy amin'ny toa mpampiasa samihafa, fa izay mitovy daholo ny vakiany, dia mety ho botika.
Raha tsy izany, azonao atao ny mangataka fanampiana amin'ny maso ivoho ho an'ny fampielezan-kevitrao. Ary koa ny fitaovana sy ny mason-tsivana amin'ny indostria, ny masoivoho dia manana fidirana amin'ny angon-drakitra marobe hanampiana ireo marika amin'ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra. Ireo masoivohon'ny varotra Influencer dia mazàna manangana sy mikolokolo fifandraisana matanjaka amin'ireo influencers, izay fantatr'izy ireo fa manana fanarahana tena izy sy laharana fandraisana anjara.
Noho izany, alohan'ny handondom-baravaran'ny mombamomba ny haino aman-jery sosialy hahazoana fanampiana amin'ny fampielezana ny fampielezana lazainao manaraka, alao antoka fa ho tratry ny fitsaboana anao ny fampiasam-bolanao fa tsy fitaka. Raha te hahalala vaovao misimisy:
Tsidiho ny Influencer Matchmaker
Tags: Amelia neatefiankinan-doha amin'ny influencerhosoka influencermarketing marketingmpanao matchmakerKourtney kardashianinfluencer makromicro-influencerPaul hollywood
Harleen Dorka dia mpanoratra atiny efa za-draharaha izay mifantoka betsaka amin'ny lohahevitra mifandraika amin'ny fitaovana nomerika amin'ny fifandraisana sy ny fanjifana. Manana ny fahaizany manokana izy amin'ny famolavolana hevitra sy hevitra momba ny fitarihana eritreritra amin'ny teny voasoratra amin'ny alàlan'ny famoronana endri-javatra voarindra sy voadinika tsara amin'ny sehatry ny indostria mampiditra: marketing sy media sosialy, fironana ho an'ny mpanjifa, fanavaozana ara-teknolojika, fivarotana sy marika ary maro hafa sehatra.